Toshiba ၏ image sensor လုပ်ငန်းကို ဒေါ်လာ ၁၅၅ သန်းဖြင့် Sony ဝယ်ယူ - မောငျပေါကျ ( Maung Pauk )
Site Map ( ဒီဘလော့အတှကျ မွပေုံ )
All Updates Reader
Playstore App Downloader for PC
Unicode <-> Zawgyi Converter
FRP Unlock Apps
Home နည်းပညာသတင်း Toshiba ၏ image sensor လုပ်ငန်းကို ဒေါ်လာ ၁၅၅ သန်းဖြင့် Sony ဝယ်ယူ
Toshiba ၏ image sensor လုပ်ငန်းကို ဒေါ်လာ ၁၅၅ သန်းဖြင့် Sony ဝယ်ယူ
Thiha Htike at 3:34:00 PM နည်းပညာသတင်း,
Advertise Here !
Sony သည် Toshiba ၏ image sensor လုပ်ငန်းကို ယန်း ၁၉ ဘီလီယံ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၅၅ သန်း) ဖြင့် ဝယ်ယူခဲ့ကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။ အဆိုပါ အစီအစဉ်သည် အောက်တိုဘာလက ကောလာဟလအနေဖြင့် ပထမဦးဆုံး ထွက်ပေါ်လာခဲ့သော်လည်း ယခုအခါတွင် ဝယ်ယူမှုကို တန်ဖိုးနှင့်တကွ Sony မှ အတည်ပြုခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
Toshiba ၏ စက်ရုံ၊ ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့် ဝန်ထမ်းများကို၂၀၁၆ ခုနှစ် မတ်လ ၃၁ ရက်တွင် ကုန်ဆုံးမည့် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း Sony ထံ လွှဲပြောင်းပေးရမည် ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ စက်ရုံသည် image sensor များကို အဓိကထုတ်လုပ်မည့် Sony ၏ ဌာနခွဲသစ်ဖြစ်သော Sony Semicondcutor Corporation လက်အောက်တွင် လည်ပတ်လုပ်ဆောင်မည် ဖြစ်သည်။
Sony သည် high-end ကင်မရာများအတွက် sensor ဈေးကွက်တွင် အောင်မြင်မှုရရှိနေရုံသာမက ၎င်း၏ ကင်မရာအစိတ်အပိုင်းများကလည်း စမတ်ဖုန်းများတွင် အားထားစရာအရာတစ်ခုအဖြစ် သက်သေပြနိုင်ခဲ့သည်။ Apple, Google နှင့် Xiaomi အပါအဝင် ကုမ္ပဏီများသည် ၎င်းတို့၏ ထုတ်ကုန်အချို့တွင် Sony sensor များကို အသုံးပြုထားသည်။
မောင်ပေါက်< Knowledge Note >
Soft : Mb
UserCloud Download Link
Tusfiles Download Link
Mediafire1 Download Link
အပမျးမကွီးရငျ ကွျောငွာလေးတှေ နှိပျခဲ့စခေငျြပါတယျ..
Please click on advertisement !
Unicode Fonts and Keyboard for PC
Zawgyi နဲ့ရေးထားတဲ့ ဖိုငျတှအေမြားကွီးကို တဈခကျြတညျးနဲ့ Unicode ပွောငျးလို့ရလား
ဒီနထှေ့ကျ - Messenger Text and Video Chat for Free Version 239.1.0.17.119 APK နောကျဆုံးထှကျ
သုံးနသေမြ အလကားရတဲ့ VPN ထဲမှာ အမွနျဆုံး နဲ့ အဆငျအပွဆေုံး 1111 vpn (CloudFlare WARP+ vpn)
IDM ( Internet Download Manager ) 6.38 Build 1 Full
All Cracked Box Tools
Error Solution Files
FRP Removel Solution
IMEI null ဖြေရှင်းနည်း.
Mobile Hardware Tutorials
Myan Track Pro
Root or Unlock Check
Service Manual and Diagrams
The Trade Times Journal
Third Person Shooter Game
USB Bootable ဆိုင်ရာ
Video Editing စာအုပ်များ
Window Phone Applications
Window Phone Games
မြန်မာ Font Installer
WiFi ထက် အဆတစ်ရာလျှင်မြန်သော LiFi
၂၀၁၆ ကို ယူမသွားသင့်တဲ့ အရာ (၈)ခု
နှစ်သစ်မှာ အောင်မြင်မှုတွေရဖို့ သင်ဘာတွေလုပ်ရမလဲ?
ဘဝမှာ မှတ်သားထားရမယ့် ဥပဒေသ (၉) ချက်
MediaTek SP Flash Tool v5.1548 Latest Version
အချိန်ဆွဲတတ်သူတွေ၊ အလုပ်လုပ်တာနှောင့်နှေးတတ်သူတွေ ...
Samsung,HTC,Huawei FRP Google Acc Lock Fix with Fa...
Vivo ဖုန်းအားလုံးအတွက် Firmware Download
Vivo ဖုန်းတွေအတွက် firmware တင်နည်း
XIAOMI FLASHER Tool
Create.tar.md5 For Samsung
​ဇော်​ဂျီ​က​နေ ​ယူ​နီ​ကုတ်​ကို ​ပြောင်း​သုံး​မယ်​ဆ...
computer လက်ကွက်လေ့ကျင့်တဲ့ ဆော့ဝဲပါ 1mb
Boot .img တွေကို One Click Tools တွေနဲ့ Unpack / R...
Hello Spy.apkနဲ့Hello Spyအသုံးပြုနည်း
သိပ္ပံနည်းပညာဆိုင်ရာ ပြပွဲ ကျင်းပမည်
Honor Hol-U10 4GB & 16GB Flashtool Firmware
GoPro Karma ဒရုန်းကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ဖြန့်ချိမည်
Offline ဖြစ်နေပင်လျှင် Facebook post များ၌ comment...
တရုတ်နိုင်ငံတွင် အင်တာနက်နှင့် ပတ်သက်၍ ဆင်ဆာပြုလုပ...
MPT ၏ နံပါတ်အလှ လေလံပွဲမှ အမြတ်ငွေ သိန်း ၁ ထောင် ရ...
Y618 T00 IMEI Null Fix Download
Monkey virusတွေကိုတခါထဲရှင်းပစ်နိုင်တဲ့Ghost Push ...
Myanmar Tower Company ကို မလေးရှား ကုမ္ပဏီ တစ်ခုက ဝ...
Toshiba ၏ image sensor လုပ်ငန်းကို ဒေါ်လာ ၁၅၅ သန်ြး...
Honour (H30U10) ဖုန်းတွေကို Software Update လုပ်မိ...
Copyright © Maung Pauk